"တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမရှိဘဲ porn ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံလျှင်ကော" - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်တဲ့ reboot စဉ်အတွင်း M နှင့်အိုခြင်းမရှိဘဲအရာ: P အားဖြင့်ယန္တရားကဘာလဲ? ဦးနှောက် M နှင့်အိုအတူပါလာသည်ဟုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလွှတ်ရာအပြုသဘောအာရုံနဲ့: P အသုံးပြုမှုကိုပေါင်းသင်းခြင်းသည်မဟုတ်
porn ဟာစွဲလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာတကယ်ရိုးရှင်းပါတယ်။ ငါတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းမှ ED, အထူးသဖြင့်ငယ်ရွယ်ကျန်းမာတဲ့လူတို့သညျဖွံ့ဖြိုးဆဲမည်သူမဆိုတစ်ခါမှမတွေ့ဖူးဘူး။ အဆိုပါပညာရေးမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများတွင်ကျွန်တော် porn ကိုစောင့်ကြည့်နေသူ့နှစ်ဆယ်ကျော်အတွက်ပညာရေးတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးသောသူဖော်ပြထား, သာတိုင်းဆယ်ရက်တခါ masturbating ။ porn ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဘို့လိုအပ်ကြောင်းမရှိဘဲ, dopamine spikes အရာဖြစ်တယ်။ porn ယောက်ျားပိုပိုပြီးရှုမြင်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုလှုံ့ဆော်အမျိုးအစားမှအရှိန်မြင့်လာတယ်အဖြစ်သည်းခံစိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်အရာဖြစ်တယ်။
သင်သိသည့်အတိုင်းညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများ၏ ဦး နှောက်နှင့် ပတ်သက်၍ သုတေသနပြုချက်မရှိပါ။ ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်နာလန်ထူဖို့အမြန်ဆုံးလမ်းကြောင်းအကြောင်းကျွန်တော်တို့သိထားတာကယောက်ျားတွေကနေညစ်ညမ်းမှုမှပြန်လည်နာလန်ထူလာခြင်းမှသင်ယူခဲ့တယ်။ ဒါကသင်၏မေးခွန်းအားလုံးအတွက်အတိုချုပ်ပါပဲ။ သို့သော်စွဲလမ်းမှုယန္တရားများသည်ညစ်ညမ်းစေသော ED နှင့်ပတ်သက်သည်မှာရှင်းနေပါသည်။ ED နဲ့ပါတ်သက်လို့ထင်ရပေမဲ့“ ပျက်စီးခြင်း” ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်သုံးမှာမဟုတ်ဘူး။ သို့သော်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပေါ်ပါသည်။
ပေါင်းသင်းမှု * နားမလည်နိုင်ရန်အတွက် P နှင့်ထိတွေ့ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ M နှင့် O မပါဘဲအငြင်းပွားမှုကဘာလဲ။ ဆိုလိုတာကဘာကြောင့် P နှင့်ထိတွေ့မှုမရှိခြင်းသည်အဘယ်ကြောင့် rebooting process ကိုအရှိန်မြှင့်မပေးနိုင်တာလဲ။
အထက်အဖြစ်။ ဒါကအရက်သောက်ရာမှတစ်ဦးအရက်ကိုတားဆီးဖို့ဖန်ကွာတာနဲ့တူရဲ့။ အလွန်အကျွံတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဟာစွဲလမ်းစေသောသို့မဟုတ် ED အရိုးစွဲဖြစ်ပါတယ်စေသောသောယုံကြည်ချက်။ ငါဖိုရမ်များပေါ်မှာရှိသမျှသောအချိန်ကိုကြည့်ပါ။ ယောက်ျားတွေတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေထွက်ပေမယ့်မပေး porn, သူတို့သည်ဆင်းရဲသောသူတို့သည်ရလဒ်များကိုရသောအခါ, ED ဖြေရှင်းဖို့ဖြတ် BS ဆိုပါလိမ့်မယ်။
တစ်ခုနဲ့နှိုင်းယှဉ်: သင် (P မှအလားတူ) အခေါင်းလောင်းမြည်သည့်အခါသင်သည်သူတို့ (M ဖို့အလားတူနှင့်အို) အစားအစာရခွေးသင်ပေးလျှင်, ထိုခေါင်းလောင်း၏အသံမွအစားအစာမျှော်လင့်ဖို့သူတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သငျသညျအချိန်ကြာမြင့်စွာများအတွက်ခေါင်းလောင်းအူကိုရပ်တန့်, ဒါပေမယ့်ထို့နောက်လအနည်းငယ်အကြာတွင်ပြန်မြည်လျှင်, သူတို့သည်နေဆဲခေါင်းလောင်းနှင့်အစားအစာအကြားအပြုသဘောဆောင်သည့်အသင်းအဖွဲ့များ, နှင့်ခေါင်းလောင်းနားကြားပေါ်မှာအစားအသောက်မျှော်လင့်ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျရိုးရိုး (P မှအလားတူ) အခေါင်းလောင်းအူဆက်လက်ပေမယ့် (M နှင့်အိုမှအလားတူ) အစားအစာထောက်ပံ့ရပ်တန့်ပါလျှင်သို့သော်သူတို့လျင်မြန်စွာနှစ်ခုအကြားအသင်းအဖွဲ့နားမလည်ပါလိမ့်မယ်။ ဆိုလိုသည်မှာအဆိုပါခေါင်းလောင်းကိုပိုမိုလျင်မြန်စွာင်း၏ပါဝါကိုရှုံးသည်။
ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း porn ယင်းသည်စွဲလမ်းမှုဖြစ်သည့်အတွက်“ ခေါင်းလောင်းထိုးခြင်း (ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုသုံးခြင်း)” သည်အရက်သောက်သုံးခြင်းနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါ့အပြင်ညစ်ညမ်းမှုနဲ့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဆက်စပ်နေတယ်၊ ​​ဒါကြောင့်ယောက်ျားတွေဟာနောက်ဆုံးမှာတော့ညစ်ညမ်းမှုမှတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုချိတ်ဆက်ထားရမယ် Pavlovian နှိုင်းယှဉ်ချက်သည်အတော်လေးတိကျသည်။
ဤကိစ္စတွင်“ ခေါင်းလောင်း” သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းဖြစ်ပြီးရည်မှန်းချက်မှာသင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အခါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုရန်အစပျိုးခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဒါကယောက်ျားတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကိုရှောင်ရှားရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲကတစ်ခုပါ။ ဒါကြောင့်သူတို့က Pavlovian ကိုမသွားဘဲ porn ကိုအလိုအလျောက်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။
ဒါဟာငှါ ထင်ရ တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းမှ porn unhook ငှါ, reboot စဉ်အတွင်းညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲတွေအများကြီး masturbate မှအသိစေရန်။ တချို့ကစိတ်ကူးများလျှောက်လွှာအတွက်ထက်သီအိုရီအတွက်ပိုကောင်းဖြစ်ကြသည်။ ရှင်းနေသည်မှာပြန်လည်နာလန်ထူ၏လွယ်ကူခြင်းနှင့်စေ့စပ်၏အသုံးအနှုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးသူယောက်ျားတွေအားလုံး PMO ရှောင်ကြဉ်ပါ။
ယုတ္တိဗေဒအရညစ်ညမ်းမှုကိုတားဆီးနိုင်သည့် ED မှရောဂါကူးစက်ရန်“ porn ကိုရှောင်ရှားခြင်းသည်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်” ဟုဆိုလိမ့်မည်။ လူတချို့ဆိုရင်ငါမအံ့သြဘူး do နေဆဲ masturbating စဉ် erectile ကျန်းမာရေးပြန်လည်။ သူတို့ပြုလျှင်ငါကဝေးတော့ဘူးကြာ, သူတို့သည်မတရားသောနဲ့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောရုန်းကန်ရင်ဆိုင်ရကြောင်းသံသယရှိကြသည်။
မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်စေ ဦး နှောက်ကိုပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်းသို့ဖြစ်စေသည်ဖြစ်စေလက်တွေ့တွင်မူ PMO အားလုံးရှိအအေးကြက်ဆင်သည်အမြန်ဆုံးရလဒ်များကိုရရှိစေပြီးအလွယ်ဆုံးလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအစီအစဉ်ကိုထိန်းသိမ်းထားသောညစ်ညမ်းသော ED မှပြန်လည်ကျန်းမာလာခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့တစ်ခါမျှမတွေ့ဖူးပါ။
ဒီတစ်ခါလည်းကပြင်းထန်စွာအလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့ကယ်လိုရီကန့်သတ်ရန်ရမယ်သူအဝလွန်သူတစ်ဦးမှအလားတူပါပဲ။ အဘယ်သူမျှမတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသင်သည်သင်၏ရည်မှန်းချက်ကိုပြီးမြောက်ဖို့လိုတင်းကြပ်သောအစားအစာဖြစ်ပါတယ်သော်လည်း, သင့်အတွက်ကယ်လိုရီလိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီမယ့်အစားအစာအဖြစ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဆက်လက်စဉ်းစားပါ။
ED ပြန်လည်နာလန်ထူတစ်ခုမှာအလွန်သိသာရှုထောင့်အစဉ်မပြတ်သတိမမူဖြစ်ပါတယ်။ "ငါသည်ဤမပွုနိုငျ" သင်ရွေးချယ်သင့်ရဲ့မူးယစ်ခြင်းမရှိဘဲအပြည့်အဝအားစိုက်ထူအောင်မြင်ရန်မနိုင်လျှင်, သင်တို့ကိုပြောပြသင့်ဦးနှောက်ရဲ့သင်တစ်ဦးကျိုးခြေထောက်ပေါ်လမ်းလျှောက်မလား? သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အအချက်ပြမှုများကိုလျစ်လျူရှုဖို့အကျိုးဆက်များရှိပါတယ်။
ရောဂါသို့မဟုတ်အိုမင်းခြင်းမှ ED သည် porn-induced ED နှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ သို့တိုင်၊ လိင်မှုကိစ္စဆိုင်ရာလိင်မှုကိစ္စပြsomeနာများရှိသည့်အမျိုးသားအချို့သည်သူတို့နှစ် ဦး အတူတူပင်ပြုမူကြသည်။ သူတို့ကစိုက်ထုတ်မှုများကိုစိတ်ကူးယဉ်သို့မဟုတ် Viagra ဖြင့်တွန်းအားပေးသည်။ ၎င်းသည်“ ကျိုးပဲ့နေသောခြေထောက်ပေါ်တွင်လမ်းလျှောက်နေသည်” ဖြစ်သည်။
M ကသို့မဟုတ်အိုခြင်းမရှိဘဲ P ကိုမှထိတွေ့မှုယူဆရင်အများကြီးလျော့နည်းတဲ့ Full-အပေါ် PMO relapse ထံမှ၎င်း၏အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်မည်မျှတစ် reboot စဉ်အတွင်းတိုးတက်မှုနှောင့်နှေးပါဘူး ??